2Taratasy daty Jaona – 2trondro
Home / Baiboly / Epistily / 2Taratasy daty Jaona
1:3 May grace, famindram-po, and peace be with you from God the Father, and from Christ Jesus, the Son of the Father, in truth and in love.
1:4 Tena faly aho, satria nahita ny zanakao sasany mandeha amin'ny fahamarinana, tahaka antsika nandray ny didy avy amin'ny Ray.
1:5 Ary ankehitriny dia mangataka anareo, Lady, tsy toy ny manoratra didy vaovao aminao, fa kosa ny didy izay efa nisy hatrany am-piandohana: fa tia ny hafa.
1:6 Ary izao no fitiavana: dia ny handehanantsika araka ny didiny. Fa izao no didy izay efa renareo Toy izany koa hatrany am-piandohana, ary izay tokony halehanao.
1:7 Fa maro ny mpamitaka efa lasa any amin'izao tontolo izao, ireo izay tsy manaiky fa i Jesosy Kristy efa tonga tamin'ny nofo. Toy izany ny olona tahaka izany no mpamitaka sy antikristy.
1:8 Mitandrina ho anareo, fandrao mahavery izay efa tanteraka, ary mba, fa tsy, dia mety hahazo ny valim-pitia tanteraka.
1:9 Izay rehetra manala ka tsy mitoetra ao amin'ny fampianaran'i Kristy, dia tsy manana an'Andriamanitra. Na iza na iza mitoetra ao amin'ny fampianarana, izany olona izany ho toy izany no manana ny Ray sy ny Zanaka.
1:12 I have much more to write to you, but I am not willing to do so through paper and ink. For I hope that I may be with you in the future, and that I may speak face to face, ka dia ny fifalianareo mba ho tanteraka.